सर्वोच्चको फैसलाले डा. भट्टराईको रोगै हराएको अनुभव ! - Naya Online
मङ्लबार, फाल्गुन ११, २०७७ (February 23rd, 2021 at 10:24pm ) ब्रेकिंग न्युज, भिडियो, राजनीति
काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला सुन्दा आफ्नो रोग नै हराए झैं भएको जनाएका छने ।
दिल्लीमा उपचार गराइरहेका डा. भट्टराईले ट्वीटमा गरी उक्त कुरा जनाएका हुन् ।
डा. भट्टराईको ट्वीट यस्तो थियो –‘कस्तो सुखद संयोग ! अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदैगर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो ! हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई बिष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो !’
त्यसैगरी डा. भट्टराईले ट्वीटमार्फत भिडियो सन्देशमा पनि उक्त कुरा दोहो¥याएका छन् । भट्टराईका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेको ट्वीटरमार्फत उक्त सन्देश आएको हो ।
१३ दिनमा संसद अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीको सिफारिसलाई बदर गरिदिएसँगै बिघटित संसद् पुनस्र्थापना भएको र १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले फैसलामा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद्को अधिवेशन बोलाउनै पर्ने वाध्यात्मक आदेश गरेको हो ।
यसअघि गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।